Arin uguba oo Bakistaan ka dhacday iyo lamaane lagu eryay - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Arin uguba oo Bakistaan ka dhacday iyo lamaane lagu eryay
Jaamacad ku taal dalkaasi Bakistaan gaar ahaan magaalada labaad ee dalkaasi ee Laahoor ayaa eriday lamaane dhigta jaamacada oo iyagu jacaylkooda muujiyay. Bakistaan oo ka mida dalalka haweenku ayna haba yaraatee wax xuquuqa lahayn ayaa falkan si aada uga falcelisay lagu eryay jacayladan.
”Guurka Bakistaan ayaa inta badan waxa ka shaqeeeya waalidka dhalay caruurta waxayna isku guursadaan ilam adeerkii marka gabadhii aan ilama adeer wiilala la dhalan, waxa caadiyan ku dhacda guur la’aan haddaana masaajida wax loogu doonin ayuu yiri Xuseen Warsame.
Dhacdadan oo ka dhacday jaamacad ku taal magaalada ayaa gabadhu u jilba joogsatey wiilka iyadoo leh ma ii guursanaysaa, dhaqankan oo inta badan ka yimi gaalada, waxa laga rabay wiilka, waxase la ytimi gabadha, kadibna wiilka oo isla ogaayeen ayaa ugu jawaabay haa, kadibna waxa sacab u timi ardayda kale ee jaamacada oo duubanaayay.
Qoraal jaamacadu ay soo saartey oo u muuqda mid guurkaas cusub ee ugubka ee banaanka laysku ogolaaday ku ERIDAY labadaa arday. Waxase xanaaq awgeed qarxay baraha bulshada.
”Waa dal kjaniisku caadi uga ciyaaro aroosyada dalkaasi aadna ugu badan yahay kufsashada caruurta yaryar, in laba isku xalaala sidan loola dhaqmo waxay muujinaysaa heerka dulmi ee dalku gaaray ayuu yiri mid ka mida dadka fikirkooda ka dhiibtey falkan jaamacadu ku kacday.
Si kastaba ha ahaate lamaanaha sida la wada arkayo iskugu sheegay guurka ayaa la sheegay in nikaaxii u dhamaaday.